စာအုပ်စင် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 34
ပြေ ဆေး၂ က မြူတိမ်ဝေေ၀ တောင်ခိုးဝေးဝေး ဘာသာပြန် စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ပြီ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၂ Twilight over Burma by Inge sargent ကို ပြေ၊ဆေး၂၊က “မြူတိမ်ဝေေ၀ တောင်ခိုးဝေးဝေး” အမည်ဖြင့် မူရင်းအတိုင်း တလုံးမကျန် မြန်မာလိုပြန်ဆိုထားပါတယ်။ သီပေါစော်ဘွားကြီးစပ်ကြာဆိုင်ရဲ့ မဟာဒေ၀ီ စ၀်သုစန္ဒီ (သြစတြီးယားလူမျိုး Inge sargent)က သူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသော ဘ၀ကို ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်တယ်။ သီပေါစော်ဘွားစ၀်ကြာဆိုင်ကို ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက အာဏာသိမ်းလိုက်သည့်အခါ ၁၉၆၂မတ်လတွင် ဖမ်းဆီးပြီး လုပ်ကြံခဲ့မှုဖြစ်တယ်။ နှစ်ပေါင်း၃၀တိုင်တိုင် စစ်အစိုးရက စ၀်ကြာဆိုင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ချက် ဘာတခုမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့။ တော်လှန်ရေးးအစိုးရက စ၀်ကြာဆိုင်ကို မဖမ်းဆီးခဲ့ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗထူးတပ်အချုပ်ခန်းထဲကနေ...
မျက်မှောက်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာများအကြောင်း – ယိမ်းနွဲ့နေသောရောင်စုံကြာ ထွက်မည် မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ စာအုပ်စီစဉ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဝင်းပေါ်မောင်က သည်လို ရေးထားပါတယ်။ “စာအုပ်က မျက်မှောက် ကိုရီးယား အကြောင်း ဆိုပါတော့။ ရေးသူတွေကတော့ ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ သူတွေပါ။ ဒီစာအုပ်က အများစုကို ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စရိတ်ကျေရုံလောက်တော့ နည်းနည်းရောင်းမယ်။ အခု ကြော်ငြာထဲမှာ အပြည့်အစုံ ပါပါတယ်။ …” No tags for this post.
လက်ပံတောင်းတောင်က မီးလောင်နေတဲ့ကာတွန်းများကို လက်ဆင့်ကမ်း လှူမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂ SF Burmese Community Organizers & Friends က ပုံနှိပ် လက်ဆင့်ကမ်းမယ့် Cartoons on Fire from Letpadaung Crackdown ကာတွန်းစာစောင်လေးကို မိုးမခမီဒီယာက စုစည်းပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၁၆ မျက်နှာ ကာတွန်းပုံ ၂၀ကျော်၊ ကာတွန်းဆရာများဖြစ်ကြတဲ့ အော်ပီကျယ်၊ အောင်ဆန်းကျော်၊ စောငို၊ မောင်ရစ်၊ ကူမိုးကြိုး၊ မျိုးကောင်း၊ ဘီရုမာ၊ လိုင်လုဏ်နဲ့ အိုကေလင်းတို့ရဲ့ သူတို့ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ မိုးမခမှာ တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ စေတနာလက်ရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ SF Burmese Community မိသားစုများရဲ့ အများစုပေါင်းကောင်းမှုအလှူအဖြစ် လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှုမှာ...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ စိတ်နေစိတ်ထား Attitude ပညာပေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀အောင်မြင်ရေးအတွက် သူရဲ့ Seven Habits of Highly Efficient People စာအုပ် (၁၉၈၉) ဟာ အလွန်နာမည်ကြီးလှပြီး အုပ်ရေ ၂၅သန်း၊ အသံဖိုင် Audio Book ၁.၅သန်းကျော် ရောင်းချရတဲ့ အရောင်းကောင်းဆုံးအဆင့်မှာ ရှိပါတယ်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင် သူမလုပ်ဆောင်ပါဘူး။ သို့သော် ချမ်းသာကြွယ်ဝ၊နာမည်ကျော်များစွာ သူ့ရဲ့စာကိုဖတ်၊ ကျင့်သုံးပြီး၊ သူ့ရဲ့သင်တန်းများကို တက်ရောက်ကြပါတယ်။ ကော်ပိုရိတ် ကုမ္ပဏီကြီးများမှာ လက်စွဲအဖြစ် သင်ကြားပေးတဲ့ ဘာသာရပ်တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ..ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ အကျင့်တရား(၇)ပါး7Habits ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ 1. Be Proactive 2....
မောင်စွမ်းရည် – မိုးမခဆောင်းပါးများ (၁) စာအုပ် ထွက်ပါပြီ (US$ 10.00) မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂ ကဗျာဆရာ၊ ဝေဖန်ရေးဆရာနဲ့ မိုးမခ၏ အကြံပေးနာယကတဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာမောင်စွမ်းရည်ရဲ့ မိုးမခဆောင်းပါးများ (၁) ထွက်ပါပြီ။ မူလက မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ပုံနှိပ်စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် ယခုတော့ မြန်မာပြည်ပမှာပဲ မှာယူသည့် အရေအတွက်အတိုင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ POD (Print on Demand) အစီအစဉ်နဲ့ပဲ ထုတ်ဝေလုိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ခေတ်ပြိုင်များ၊ ခေတ်ပြိုင်အတွေ့အကြုံများနဲ့ မိတ်ဆွေ စာရေးဆရာများ၊ စာနယ်ဇင်းသမားများအကြောင်းကို ရုပ်ပုံလွှာများ ဖွဲ့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမခရဲ့ စာအုပ်အစီအစဉ်များထဲမှာ ဆရာမောင်စွမ်းရည်အတွက် ပထမဦးဆုံး ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာရေးသားခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးများစွာအနက်...
မိုးမခစာအုပ်စင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ မြန်မာ Observer Media Group က ထုတ်ဝေတယ်။ မော်ကွန်း Chronical စာစောင်။ စာမျက်နှာ ၁၆၈ မျက်နှာ။ အင်တာနက်လိပ်စာက ၀ိုင်ပီအိုင်လို့ အများသိတဲ့ Yangon Press International။ အကြံပေးတွေက ရဲနိုင်မိုးနဲ့ မြင့်ကျော်၊ အယ်ဒီတာတွေက ဥာဏ်လင်း၊ ၀င်းဇော်လတ်၊ ဇေယျာလှိုင်၊ စာရေးဆရာတွေက သတင်းရေးဆရာတွေများတယ်။ လစဉ် (လား) အပတ်စဉ် (လား) အုပ်ရေ ၅၀၀၊ တအုပ် ၂၅၀၀ကျပ်။ ပြည်ပက Time, Newsweek, Economics, စတဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ မျက်မှောက်ရေးရာ အပတ်စဉ်စာစောင်တွေလိုမျိုး တွေးစရာ ဖတ်စရာ ဆောင်းပါးတွေနဲ့ စာအုပ်လို့ ဆိုကြပါစို့။ ပြည်တွင်းမှာ ရောင်းတယ်...
ခင်မျိုးချစ်၏ သတင်းစာလောက စာအုပ်အညွှန်း ဂျူနီယာဝင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂ စာအုပ်အမည် – သတင်းစာလောက ရေးသူ – ဒေါ်ခင်မျိူးချစ် ပထမအကြိမ် – ၁၉၅၂ သြဂုတ်လ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း ဒုတိယအကြိမ် – ၂၀၁၂ ဇွန်။ ရန်အောင်စာပေ အုပ်ရေ ၅၀၀၊ စာမျက်နှာ – ၂၃၀။ တန်ဖုိး – ၂၀၀၀ကျပ် “ပြည်သူ့သတင်းစာဟူသည်ပြည်သူတို့၏ယုံကြည်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသောပစ္စည်းဖြစ်၏ … ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သတင်းစာနှင့်မကင်းသူဟူသမျှတို့သည်လည်း တာဝန်ရှိသမျှ အစွမ်းကုန်အောင် ပြည်သူတို့၏ယုံကြည်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ကိုထမ်းသောအလုပ်ထက် ယုတ်ညံ့သောတာဝန်ကိုလက်ခံခြင်းသည်ပင်လျှင် ပြည်သူ့ယုံကြည်မူကိုသစ္စာဖောက်ရာကျသည်ဟူ၍လည်းကောင်း ကျွနိုပ်ယုံကြည်သည်။” ယင်းသည်သတင်းစာဆရာ့လက်သုံးဝါဒဖြစ်သည်။ “သတင်းစာများ၏ကောင်းကျိူးဆိုးကျိူးကို စောဒကတက်စရာ အများပင်ရှိလာသည်။ သတင်းစာများသည် မဖွယ်ရာသောမုဒိမ်းကန္တသတင်းများကို ဖော်ပြကာ လူတို့၏အကျင့်စာရိတ္တကိုပျက်ပြားစေသည်။ သတင်းစာလွတ်လပ်မူဟု အမည်တပ်ကာ စည်းကမ်းမဲ့ရေးသားကြသည်။...
အရှင်ဝီရသူ၏ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပမည် မိုးမခမိတ်ဆွေ (မန္တလေး) အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသာဟာယကျောင်းနာယက ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ- ဝီရသူ(မစိုးရိမ်) ရေးသားသော “နှလုံးသားကို သဖန်းပင်ပေါ်မှာ ထားခဲ့သူ” စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကို ၁၃၇၄-ခု သီတင်းကျွတ်လပြည့် (၃၀-၁၀-၂၀၁၂)အင်္ဂါနေ့၌ ကန်တော်ကြီး ပြည်ကြီးမွန်ဖောင်တော်မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စာအုပ်သည် အရှင်ဝီရသူ အိုးဘိုထောင်မှာ နေရစဉ် ၂၀၀၉-နှစ်က ရေးခဲ့သော ပေးစာ(၅)စောင်ကို စုစည်းထားသည့် စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ဂျွန်ယက်တော ကိစ္စဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ပုံစံဖြင့် ရေးသားထားသော အားပေးစကားများလည်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စာအုပ်သည် စာပေစိစစ်ရေးဌာန မဖျက်သိမ်းခင် ကတည်းကပင် စာမူခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်...
မိုးမခစာအုပ်စင်အညွှန်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ဒေါ်စု မိန့်ခွန်းပေါင်းချုပ်စာမူကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာရိုက်နှိပ်ပြီး သြစတြေလျနိုင်ငံမှာ ဖြန့် ချိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ဝေသူကတော့ သြစတြေလျနိုင်ငံ The Trustee for Building Brighter Burma Trust က ဒေါက်တာမနုရီ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ဒီဇိုင်းကိုသီဟမောင်မောင်ကပြုလုပ်ပေးပြီး စာမျက်နှာ ၄၅၇ရှိပါတယ်။ ၁၉၈၈သြဂုတ်လက ရွှေတိဂုံစေတီတော် လူထုအစည်းအဝေးပွဲ၌ ပြောခဲ့သောမိန့် ခွန်းမှ နောက်ဆုံး၂၀၁၂စက်တင်ဘာ၂၇နေ့က Yale တက္ကသိုလ်၌ ပြောခဲ့သော ဒေါ်စုမိန့် ခွန်းအထိ ထည့်သွင်းထား ပါတယ်။ စာအုပ်ကို အောက်တိုလကုန် စတင်ဖြန့် ချိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူရမဲ့လိပ်စာကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ The Trustee for Building Brighter Burma Trust ABN:33 498 300 132 Tel: +612 9661 8684 Fax:...
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month March 2018 (91) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
မင်းငြိမ်းအေး – ပျင်းရိခြင်းအကြောင်း https://t.co/fkOsFIxUXZ https://t.co/IdRiANOBAn about 16 minutes ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်းရွှေဗိုလ်ရဲ့ ဟန်ရေးပြသူတွေရေ … https://t.co/hp2UqmKeUO https://t.co/5DLll1YISv about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● ဂျပန်ကုမ္ပဏီများက မြန်မာ့စီးပွားရေးကို အုပ်စီးမိသွားပြီလားနဲ့ FDI/PPP https://t.co/3wYex7DAg9 https://t.co/NO9WruOBDt about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၆၁) https://t.co/XUmwSnfCPr about 18 hours ago ReplyRetweetFavorite
လင်းသက်​ငြိမ်​ – သရဲရထား https://t.co/FdgSetGbNI about 21 hours ago ReplyRetweetFavorite